कति गजबको हिन्दु धर्म रैछ, शंखको यति फाइदा विज्ञानले भन्दा पहिले पत्ता लगायो – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १२, २०७८ समय: १२:२६:२८
शंखलाई हिन्दू धर्मसँग जोडेर हेरिन्छ तर शंखको परिचय त्यतिमै मात्र सीमित छैन । यसको वैज्ञानिक महत्व पनि छ । यसको प्रयोगबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै फाइदा समेत हुन सक्छन् ।
हिन्दू धर्म एवं जीवशैलीसँग त्यस्ता थुप्रै धार्मिक क्रियाकलाप तथा परम्परा जोडिएका छन् जसको हाम्रो जीवनमा ठूलो महत्व छ । भन्ने नै हो भने हिन्दू धर्म नभएर जीवन पद्धति हो र यसभित्रका परम्पराहरू वैज्ञानिक छन् । यस्तै एक परम्परा हो शंख बजाउनु ।
हिन्दू धर्ममा शंखको स्थान महत्वपूर्ण छ । शंख घरमा राख्दा मात्र पनि नकारात्मक ऊर्जा एवं शैतानी शक्तिहरू भाग्ने विश्वास पाइन्छ । आयुर्वेदले पनि शंखलाई लाभदायक मानेको छ ।
शंख बजाउँदा मूत्रथैली, पेटको तल्लो भाग, डायप|mम, छाती एवं गर्दनको मांसपेशीहरूमा स्वतः एक्सरसाइज हुन्छ । शंख हाम्रा लागि कति फाइदाजनक छ र ती फाइदा के के हुन् ? जानौँ,
फोक्सोका लागि लाभदायक : शंख बजाउँदा फोक्सोको राम्रो व्यायाम हुन्छ । पुराणहरूमा बताइए अनुसार साससम्बन्धी रोगीले नियमित शंख बजाउने हो भने ऊ त्यस रोगबाट मुक्त हुनसक्छ ।
प्रतिदन शंख बजाउने व्यक्तिलाई घाँटी तथा फोक्सोको रोगले छुन सक्दैन । शंखबाट मुखका तमाम रोग नाश हुन्छन् । शंख बजाउँदा अनुहार, श्वासप्रश्वास प्रणाली अर्थात् नाक, कान, घाँटी सबैमा व्यायाम पुग्छ । नियमित शंख बजाउने हो भने स्मरण शीक्त समेत वृद्धि हुने बताइएको छ ।
छाला तथा हड्डीमा फाइदा : शंख छालासम्बन्धी रोगका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यो कसरी हुनसक्छ भन्ने लाग्ला तर यो तरिका हेरौँ त अनि कस्तो लाग्छ ? बेलुकी शंखमा पानी हालेर राखिदिने ।
भोलिपल्ट बिहान उक्त पानीले छालामा मसाज गर्ने । यसो गर्नाले एलर्जी, र्‍यासेज, सेतो दागजस्ता छालासम्बन्धी समस्या हट्छन् । शंखमा प्राकृतिक क्याल्सियम, गन्धक एवं फस्फोरस प्रशस्त पाइन्छ । यसै कारण शंखमा राखिएको पानी सेवन गर्ने हो भने हड्डी बलियो बन्छ । यो दाँतका लागि समेत लाभदायक हुन्छ ।
आँखाका लागि लाभदायी : आँखा सुन्निने, सुख्खा हुने तथा आँखामा हुने संक्रमण हटाउन पनि शंखले सहयोग गर्छ ।
यस्तो समस्या छ भने रातभरि शंखमा राखेको पानी अँजुलीमा भरेर त्यसमा आँखा डुवाई नानी यताउति डुलाउनुपर्छ । यो प्रक्रिया २०-३० सेकेन्डजति गर्नुपर्छ । यसका साथै रातभरि शंखमा राखिएको पानीमा सफा सामान्य पानी बराबर मात्रामा मिसाएर आाखा धुनुपर्छ । यसो गर्दा आँखाको ज्योति वृद्धि हुन्छ ।
हृदयाघातको सम्भावनामा कमी : शंख बजाउँदा फोक्सोको दूषित हावा बाहिर निस्कन्छ र शरीरलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ ।
नियमित शंख बजाउनाले शरीर शक्तिशाली बन्छ र कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन्छ । शंखको आवाज लगातार सुन्नु मुटुरोगीका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसबाट हृदयाघात हुने सम्भावनामा समेत कमी आउँछ ।
कपालका लागि हितकर : रातभरि शंखमा राखिएको पानीमा गुलाबजल मिसाएर त्यसले कपाललाई जरैदेखि मालिस गर्ने । यसो गर्नाले केही दिनमै कपालको रंग प्राकृतिक हुनथाल्छ । यो पानीले आँखीभौँ, जुँगा तथा दारीसमेत धुन सकिन्छ । यसो गर्नाले कपाल मुलायम बन्दछ ।
मलद्वार तथा प्रोस्टेटका लागि राम्रो : शंख बजाउँदा त्यसको सीधा असर मलद्वार तथा प्रोस्टेट ग्रन्थिमा पर्छ । शंख बजाउनाले मलद्वारको मांसपेशी बलियो हुन्छ ।
नियमित शंख बजाउँदा पायल्स तथा यससम्बन्धी अन्य रोगमा समेत लाभदायी हुन्छ । यसैगरी यसको असर प्रोस्टेट ग्रन्थिमा पनि पर्छ । नियमित शंख बजाउने व्यक्तिलाई प्रोस्टेट ग्रन्थिसम्बन्धी रोगले सताउँदैन ।